UKUZA KWE-'BRAD PITT 'YEMBALI YEMFAZWE YEHLABATHI Z 2 KUNYE NAYO YONKE INKCUKACHA YAMVA NJE OMELE UYAZI MALUNGA NEMUVI NGAPHAMBI KOKUFIKA KWAYO - IIMUVI
Imfazwe Yehlabathi Z ikhutshwe kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo kwaye ibilixesha elide okokoko iParamount ibisithi isebenza kwi
Imfazwe Yehlabathi Z ikhutshwe kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo kwaye ibilixesha elide okokoko iParamount ibanga ukuba isebenza ngokulandelelana.
Ngaba kuza kubakho i-sherlock holmes 3
Umboniso bhanyabhanya ubusekwe kwinoveli enesihloko esifanayo nguMax Brooks. Yabetha kwangoko kwi-ofisi yebhokisi kunye nokufumana ngaphezulu kwe-500 yezigidi zeedola kwihlabathi liphela. Abaphulaphuli ngokucacileyo babelangazelela ukulandelelana, kutheni le nto ingekakhutshwa le sequel?
Mhlawumbi iya kufana nje nomdlalo bhanyabhanya wokuqala kunye nenqanaba lokuphuhliswa kwengxaki ekuhambeni kwexesha kuya kukhokelela ekukhululweni komkhondo oqinisekisiweyo. Nangona kufuneka siyitsho ngentliziyo enzima, kubonakala ngathi ukukhululwa kukude kakhulu okwangoku.
Kodwa masingalahli ithemba! Umvelisi-mbumbano uJeremy Kleiner uthe ngoJanuwari 2020 ukuba enye into inokwenzeka ngolunye usuku.
Uthe bayayithanda incwadi kaMax Brooks. Bayayithanda indalo iphela.
Akubonakali ngathi iMfazwe Yehlabathi Z igqityiwe kwaye igqityiwe. Kuyinto enobunzima ngokwaneleyo ukusishiya sihlaziyekile ukuba le ndlela iyakwenzeka ngolunye usuku.
umhla woku-5 wokukhutshwa
Ikamva lokuqhubela phambili lifana neZombi kwifilimu, ukulandelelana kunokuvuka kwabafileyo. Ukuba kuwo onke amaxhama ukuvuka kwakhona, kuya kuba nohambo olude ukuya kwiscreen.
Ngaba iMfazwe yeHlabathi Z 2 iyakwenzeka okanye ifile?
Ukulandelelana kwacwangciswa ukukhupha ngo-2017, kodwa unyaka wafika wadlula ngaphandle kwemveliso eyenzekayo.
Ukudubula kwakuza kuqala ngo-2018. Nangona kunjalo, yayingenakwenzeka kuba uBrad Pitt wayexakekile esebenzela iXesha elinye eHollywood.
Esinye isizathu sokulibaziseka kukuba uDavid Fincher wayesebenza kwisigaba sesibini seMindhunter.
Oku bekufanele ukuba kuthetha ukuba ukudubula kuyakwenzeka ngoJuni 2019 endaweni yoko.
Ngelishwa, loo mhla waphinda waqhubela phambili ngoMatshi.
Kodwa emva koko zafika iindaba zokuba le sequel yaphinda yacothiswa ukusukela oko eyeka iParamount Ukuveliswa kwangaphambili kwento elandelayo .
Ke ngoku, ukulandelelana kubi kakhulu kune-zombie eyintloko ebolayo ngeentshulube, kodwa ngubani owaziyo, inokuphinda ivuke kwixesha elizayo.
ukubetha igazi nge-netflix
Ngoobani Abaya Kuba Kwimfazwe Yehlabathi Z 2?
Ukuba ukulandelelana uyaphuma, UBrad Pitt uzakubuyela kwindima yakhe ekhokelayo njengoGerry Lane (owayekade engumphenyi weZizwe eziManyeneyo kunye nomlobi ongoyikiyo we-zombie), kodwa loo nto inokuthi itshintshe ngokuxhomekeke kunyaka olandelayo.
UMireille Enos wabhengeza ngokusesikweni ukuba uza kubuya abe ngumfazi wakhe, uKarin Lane ngoMeyi ka-2016.
Kusekubi ukuba izinto zisafana nasemva kweminyaka emine.
Iya kuba yintoni iMfazwe yeHlabathi Z 2?
Umboniso bhanyabhanya wokuqala ogqitywe ngombono wethemba lokusinda koluntu ngokuchasene neZombi, kodwa njengoko uGerry Lane esitsho kwincopho yomdlalo bhanyabhanya, kusekho okuninzi ekufuneka kwenziwe.
Incwadana, ibali lakhe lifikelela kwihlabathi kwaye lifikelela kwikamva lezopolitiko ibali elilinganayo.
Nangona kunjalo, ubhubhane we-zombie uyayiguqula ngenxa yoko, unikezela ngezinto ezininzi eziza kwenziwa ngabenzi beefilimu.
KwiMfazwe yeHlabathi Z 2 singathanda ukubona ukulwa komntu ngokuchasene neZombi. Kodwa nokuba loo mlo uya kuqala uza kuba ngumbuzo.
Ewe, nokuba imovie ithatha enye iminyaka emibini ukubonakala kwizikrini, kuya kuba kufanelekile ukulinda. Njengoko abalandeli bakaBrad Pitt banokulinda kancinci, ishumi leminyaka alikho kakhulu ukulinda. Ekugqibeleni, izinto ezintle ziza kwabo balindileyo.
Amaphupha amabi ekhitshini ukutya okumnandi
umzingeli x umzingeli wokubuya komhla
libuya nini ikhephu
Ngaba kuya kubakho ukulandelelana kuka-alita